13 mapurojekiti ane Raspberry Pi yeimba yedu, nyore uye anobatsira kwazvo! | Mahara emahara
Kune akawanda mapurojekiti neRaspberry Pi Uye nekuda kweMagPi, mwedzi wega wega kune mamwe mapurojekiti atinogona kuita neRaspberry Pi nemari shoma. Mune ino kesi isu tichataura nezve makumi maviri mapurojekiti atinogona kuita neRaspberry Pi yemusha wedu.
Mapurojekiti anoita kuti imba iwedzere kubatsira uye kujekesa kure nekushandisa Raspberry Pi se minipc, chimwe chinhu chatinoziva tese parizvino. Aya mapurojekiti ndeeimba asi havasi ivo chete mapurojekiti aripo kune ino ndima, kunyange hazvo ari iwo anonyanya kufarirwa.
1 Iyo Home Media Center
2 SSH gedhi
3 Ramba uine ziso kumhuka dzinovaraidza
4 Imba yemoto firewall
5 Imba yeGoogle
7 Hanyanisi Pi
9 Arcade muchina
11 Temperature kuongorora
12 Otomatiki kudiridza
13 Kuvhura mwenje nemimwe michina
14 Mamiriro ekunze
15 Chiteshi cheFM pamunwe wako
16 Yemagetsi pet pet feeder
17 Kudzora kwezwi kwegaraji rako
18 Motion sensor kamera
19 MoccaPi kana yakanakisa kofi inogadzirwa neRaspberry Pi
20 Bindu rakanaka redhijitari
Iyo Home Media Center
Uchishandisa Raspberry Pi uye Raspbian inosanganiswa naKodi tinogona kuva zvakachipa uye inokwanisika midhiya nzvimbo. Maitiro acho ari nyore uye tinogona kuichinjira kuOpenElec. Chero zvazvingaitika, isu tinongoda Raspberry Pi, tambo yehmmi ku batanidza neTV yedu uye isina waya keyboard ine yakavakirwa-mukati mbeva kukwanisa kudzora sarudzo sisitimu inoshanda. Mutengo wacho unodhura uye chokwadika chinhu chinonakidza pamusha.
Iyi ndiyo mirairo yakajairika inoshandiswa paRaspberry Pi
Vazhinji vedu tinoda kuwana kwekunze kumakomputa edu epamba uye makomputa. Izvi zvinogona kuve nyonganiso ye IP kero uye ye network chengetedzo, saka tinogona shandisa Raspberry Pi kuitira kuti ive neruzhinji IP kero uye batanidza ku kuburikidza neSSH kuRaspberry Pi iyo ichave nehukama nemakomputa ari mumba. Aya makomputa achave aine yakavanzika IP kero, saka vekunze havazokwanise kuiwana. Nezve chirongwa ichi isu tinongoda Raspberry Pi pamwechete neRaspbian. Izvo chete.
Ramba uine ziso kumhuka dzinovaraidza
Imwe chirongwa chinonakidza cheRaspberry Pi inosanganisira kushandisa iyo yakakurumbira Pi Cam kuongorora vacheche kana mhuka dzinovaraidza. Isu tinongofanirwa kubatanidza iyo Pi Cam kune yedu Raspberry Pi uye nekuisa kamera muchinzvimbo chekurekodha kuti pane chipfuwo kana mwana aripi. Wobva waona zvavakaita kana zvavanoita Isu tinongofanirwa kubatana neRaspberry Pi kuburikidza neSSH kana neiri kure yekushandisa application kuona izvo zvave kana zviri kunyorwa.
Iyi yekutarisisa mhuka inobatsira mudzimba asi inodhurawo kupfuura mamwe mapurojekiti, sezvo tichifanira kuwedzera mutengo wePiCam kumutengo weRaspberry Pi. Chero zvazvingaitika chirongwa chinonakidza chemba.
Imba yemoto firewall
Takataura nezvekuwana makomputa edu kubva kunze asi isu tinogona zvakare kuita iyo Raspberry Pi dziviriro pakurwiswa kwekunze. Mune ino kesi isu tinongoda chete Raspberry Pi, hub (kana isu tine makomputa mazhinji ane wired kubatana) uye Tor yeRaspberry Pi.
Kutenda Tor uye tekinoroji yayo ye "hanyanisi", isu tinogona kuve ne firewall ine simba isingangotidziviriri kubva pakurwiswa chete asiwo tinogona kuita kusazivikanwa webhu kubhurawuza. Mune ino kesi chirongwa ichi chakavakirwa pane software. Kune Raspbian inozivikanwa isu tinofanirwa kuwedzera Tor uye tekinoroji yayo. Chinhu chiri nyore uye chiri nyore.
Virtual vabatsiri varikubata. Uye mune ino kesi, iyi tsika haina kubatana kune yakatarwa Hardware asi inogona kuve chero chishandiso. Saka chero munhu anogona kuita iyi Raspbery Pi chirongwa uye gadzira yako chaiyo mubatsiri nekutenda kuRaspberry Pi. Google yagara iri mukati kubatana neMagPi ivo vakavhura kit kuvaka kadhibhodhi Google Imba. Icho chirongwa chinonakidza uye chinobatsira chemba. Shanduko ichangobva kugadzirwa iyo inotsiva iyo kadhibhodhi furemu ne intercom yekumba kubva kuma80.
Kana Google Imba yabatana neRaspberry Pi, Amazon Echo yanga isati iri shoma uye yakareba pamberi peGoogle isu taigona kutogadzira yedu yega Amazon Echo. Echo mutauri akangwara ave mufashoni. Vashandisi vanogona kuvaka yavo yeAmazon Echo replica yekutenda kuRaspberry Pi. Yange iri nguva yakareba kubvira tinotaurira maitiro ekuivaka uye zvirokwazvo chirongwa chakakura kuve nacho kumba. Ichi chishandiso chinogona kana kuve nani pane chigadzirwa chepakutanga sezvo isu tichigona kuchiita chinotakurika kana kuwedzera zvakajairika izvo mudziyo weBezos usina.
Isu takambotaura nezvekuvaka iyo yekuzvigadzirira Firewall nekuda kweRaspberry Pi. Onion Pi ine basa rakafanana, asi kusiyana nechimwe chirongwa, Onion Pi inopa chengetedzo huru kana tichida kuwana kubva kunze kuzvikwata zviri mumba medu. Onion Pi inoshandisa iyo Tor Network protocol, network iyo inoshandisa mashandiro ezvigadziko zveeiii kupa yakawanda chengetedzo uye kuvanzika kupfuura zvakajairwa. Vhura Iyi link Isu tinokuudza maitiro ekuvaka chirongwa ichi.
Iyo komputa yakajairika, yakajairwa uye ingangoita inodikanwa gadget mudzimba. Chinhu chakange chisina kufanana nemakore makumi matatu apfuura. Chero zvazvingaitika, nekuda kweichi chirongwa cheRaspberry Pi uye eReader, tinogona kuva nekombuta yekutanga iyo zvakare ine yakanaka skrini yekudzivirira kukuvadza hutano hwemaziso edu. Kusiyana nemamwe mapurojekiti, KindleBerry Pi inonakidza kwazvo nekuti iwe unogona kushandisa gadget seye yekare eReader kana kugona kuve neReader uye komputa mune rimwe gadget.
Mudzimba zhinji, imba yekutamba yave imba yakakosha mumba. Kazhinji, pasofa yakasununguka uye akawanda emagetsi emitambo semavhidhiyo consoles, ma mediacenters, nezvimwe ... Tinokukurudzira gadzira yakasarudzika arcade muchina iyo inoratidza yeupenyu hwese mitambo yemavhidhiyo seSuperMario Bros. Kutenda Raspberry Pi, tinogona kugadzira arcade muchina wezuro tisina kubhadhara makumi maviri neshanu peseta yavaimbotibvunza mutambo. Iyo mitambo inogona kushandurwa uye mutengo, nekuda kwezvinhu zvakadzokororwa uye Raspberry Pi Zero W, ingangoita kushoma. Vhura Iyi link Iwe unowana rumwe ruzivo nezve kuvaka arcade muchina wemitambo yedu kamuri.
Kudzokera kuchirongwa chakapfuura, mune iyi nyaya isu tiri kutaura nezve kuberekeswazve kwepakutanga Game Boy. Uyu muchina weArcade unogona kugadzirwa zvakakwana nekuda kweiyo Raspberry Pi Zero W. Chinhu chakaoma nezve chirongwa ichi kugadzirwa kwekasi. Pamwe tinoshandisa muchina wekare wekutanga kana isu tinoprinta kadhi neiyo 3D purinda. Asi, kure neizvi, mutengo maererano nevaraidzo yaunopa wakaderera kwazvo. Kare kare takataura nezvazvo chirongwa ichi asi kana uchida, muMirayiridzo iwe unowana mamwe akafanana mapurojekiti ane madiki misiyano.
Tembiricha yemumba yakakosha kwazvo. Dhigirii kana maviri anogona kutiita kuti tishandise mazana ema euro pagore pakupisa kana magetsi. Naizvozvo kushandiswa kwetembiricha yekutarisa kunogona kubatsira zvakanyanya. Nezve Proyect Tichada Raspberry Pi, sensors tembiricha uye LCD skrini inoratidzika kuratidza tembiricha yekamuri yega yega. Kana isu tichida kugadzira yakanyatso tarisa tembiricha, tinogona kushandisa Arduino mabhodhi ekuwedzera ma sensors mune chero nzvimbo mumba, asi neyakareruka Raspberry Pi tinogona kuwana mibairo mikuru. Vhura Mirayiridzo Iwe uchawana rumwe ruzivo nezve iyi projekiti.
Munguva yemafaro nguva zhinji vanowanzoenda kuzororo. Chiitiko chakakosha asi icho chinotiunzira matambudziko epamba nekuti tinoda kudiridza zvirimwa, kudyisa zvipfuyo, nezvimwe ... Muchiitiko ichi pane chirongwa icho nekuda kweichi chirongwa neRaspberry Pi isu tinogona otomatiki yekudiridza system yezvirimwa zvedu. Uye zvakare, nekuda kweiyo Wi-Fi basa reRaspberry Pi, isu tinogona kunyange kuita iro basa kubva kune yedu smartphone. Muizvi Mirayiridzo peji Iwe unozowana iyo software, iro runyorwa rwezvinhu uye kunyangwe iro rekuvaka gwara reiyi projekiti.
Kuvhura mwenje nemimwe michina
Pakutanga isu takataura nezve kugadzira imba yemoto firewall kuti tikwanise kutaura nevekunze. Iyi purojekiti inofunga kupa basa kune iro firewall nekuti isu tichaida iyo kana isu tikasika iyi projekiti. Kutenda Raspberry Pi uye mwenje mwenje, tinogona kubatidza mwenje mumba kana zvimwe zvishandiso kubva kune yedu smartphone. Tinogona kutoita zvakafanana nemwenje yakajairwa, asi pane izvi isu tinofanirwa kuvaka adapta iyo "inodzosera" smart kumababu. Mune Mirayiridzo iwe yaunogona kuwana gwaro rekuvaka yeiyi inonakidza chirongwa, nekuti vanopfuura mumwe vakakanganwa kudzima mwenje hazvina kudaro?
Tichishandisa skrini, tinogona nyore kugadzira zadzisa mamiriro emamiriro ekunze ayo achatipa huwandu hweruzivo senge tembiricha, hunyoro, kumanikidzwa kwemhepo, mwaranzi yeultraviolet, mwero wechiedza, uye kunyange mwero wenitrogen dioxide.
Kana isu zvakare tichigona kuzviita inoyevedza uye inochengetwa-yakanaka kesi tinogona kuve mumba medu inoyevedza mamiriro emamiriro ekunze, pakukwirira kwechero ipi yatinogona kuwana, semuenzaniso, paAmazon.
Mune ino link iwe une iyo mirairo kudzika kuzoshanda izvozvi.
Chiteshi cheFM pamunwe wako
Kana kuda kwako kuri redhiyo, Kutenda kune Raspberry Pi, tambo ichaita senge antenna uye Python script ichatibvumidza kutamba odhiyo, isu tichakwanisa kuve muratidzi wechirongwa chidiki icho shamwari dzedu dzachakwanisa kuteerera semuenzaniso kuburikidza nemaredhiyo ari pedyo.
Nekuda kwechigadzirwa ichi, icho chaunogona kuvaka kuburikidza nematanho anotevera, isu tichakwanisa kutepfenyura pamafrivis anotangira pa1 MHz kusvika pa250 MHz, kunyangwe iyo yakanaka ingave yekutepfenyura pama standard FM frequency (kubva pa87.5 MHz kusvika pa108.0 MHz). Zvakare chengetedza mupfungwa kuti iwe unofanirwa kuremekedza nhepfenyuro dzezviteshi zvakawanda zvine chiteshi chepamutemo nguva dzese.
HERE une mirairo yekuvaka yako FM chiteshi.
Yemagetsi pet pet feeder
Pese panosvika nguva dzezororo, dambudziko rekuti kana kuti tisiye ani zvipfuyo zvedu zvinowanzouyawo. Neraki kune avo vese vanogara nekitsi, vanogona kuvasiya vega, vachiwana mumwe munhu anovashanyira, kunyangwe kana kungovapa rudo kamwe chete pazuva kana kamwe chete mazuva maviri. Uye ndizvo kuvonga zvakare zvakare kune Raspberry Pi isu tichakwanisa kugadzira yedu yega otomatiki feeder iyo ichagovera zviyero zvechikafu otomatiki kumakati edu, kana chero imwe mhuka.
Iyo purojekiti yakabhabhatidzwa se Simba Katsi KudyaYakagadziriswa naDavid Bryan, yakagamuchirwa zvakanyanya uye munhu wese anofarira kudzora zvinodyiwa nezvipfuyo zvavo, kunyangwe kana vari pazororo. Kana isu tikawedzera kamera yekutarisisa, zvakare inodzorwa nekutenda kune yedu Raspberry Pi, chirongwa ichi chinogona kuve chinonakidza uye chinobatsira.
Kudzora kwezwi kwegaraji rako
Siri, anonyatso kuzivikanwa mutevedzeri wezwi anosanganisira akasiyana Apple zvishandiso, anogona kutibatsira muchirongwa ichi uye vhura gonhi redu regaraji uine izwi rairo. Isu tinokuyambira kuti iro basa harisi nyore, asi mhedzisiro yacho inongova inoshamisa uye pamusoro pezvose zvakanaka. Uye ndezvekuti hatife takatombofanira kubuda mumotokari kuti tivhure musuwo wegaraji, uye tinovimba hatifanirwe kutora kiyi nepahwindo zvakare kuti ivhure.
Motion sensor kamera
Isu tatoona zvigadzirwa zvakawanda zvinogona kugadzirwa neRaspberry Pi kwazvinove kamera yekutarisa, asi isu tinogona kuenda nhanho imwe kumberi. Uye ndeyekuti ichi chishandiso chine simba chinotibvumira kuti tigadzire, zvakanyanya kana zvishoma nyore, a yekucheresa kamera iyo inoona kufamba, iyo semuenzaniso inogona kutibvumidza isu kuti tione kufamba kunogona kuitika mukati memba yedu.
Kana iwe usiri kuda kupa inofamba kudzora izvo zvinoshandiswa, izvo zvinogona kunge zvishoma paranoid, iwe unogona kugara uchishandisa iyo kudzora kana mhuka dzako dzinovaraidza dzichitenderera imba kana kuenda kunze kubindu.
En Iyi link Iwe une nhanho dzese dzaunofanirwa kutevedzera kuvaka yako yekufamba inzwa kamera kamera.
MoccaPi kana yakanakisa kofi inogadzirwa neRaspberry Pi
Kana isu tichiti iko kushandiswa kweRaspberry Pi kuri kusingaperi, uye kunyangwe vazhinji vachizvipokana, ndinotya kwazvo kuti isu takanga takanganisa kwete iota imwe. Uye ndeyekuti ichi chishandiso chakakurumbira chakatokwanisa kusvika kukicheni yedu neruoko rwe MoccaPi, akangwara kofi mugadziri kugadzira kofi kana tii, maererano nemaonero evose vakambozviedza, zvakanaka kwazvo.
Mutengo wese hauna kunyanya kukwirira, uye ndezvekuti kana tangowana zvese zvinhu zvatinoda kuti tivake ichi chinoda kofi muchina, isu hatifanire kuenda zvakanyanya kupfuura makumi masere euros.
Kana iwe uchida kutanga kuvaka MoccaPi nhasi, heano ma mirairo kuti unofanira kutevera.
Bindu rakanaka redhijitari
Kana iwe uchida zvirimwa uye iwe ungadai waifarira kuve nechikamu chidiki chevhu kuti uve nebindu rizere nemaruva, asi hazvingagone kudaro, pamwe chirongwa ichi chine Raspberry Pi chiri padhuze neicho chawaigara uchirota. Zvinogona kutaridza sekuseka, asi nekuda kwechimwe chezvinhu izvi zvine simba tinogona kuvaka nenzira yakapusa yaungafungidzira, uye zvakare nehunyanzvi hushoma, a gadheni redhijitari umo maruva anofamba, shiri kana vatsoropodzi vanowoneka vakatenderedza maruva kana mukati mawo mune kana kunoshamisa kuvhenekera panguva yehusiku.
Muvhidhiyo yeYouTube yaunogona kuona pamusoro apa une mirairo yese (uye mu next link), kunyangwe iwe uchinge uine Raspberry Pi isu tinokurudzira kuti iwe ushandise fungidziro yako kugadzira inoshamisa uye yakanaka gadheni iyo ichauya kuhupenyu pese paunoda.
Iyo Raspberry Pi yaenda munguva pfupi kubva pakuve chishandiso chisinga zivikanwe neruzhinji rwevanhu, ichiva chishandiso chakakosha. yenhamba yakakura yemapurojekiti. Muchikamu chino takuratidza chitsama chakanaka chemba yako, asi mashandisiro uye mashandisiro eichi chidiki uye chisingadhuri mudziyo hachipere. Vanhu vazhinji vanoti mikana yatinayo neRaspberry Pi inoenda kure nekufunga kwako uye kugona kugadzira nekushanda nayo.
Wakagadzira chirongwa chine Raspberry Pi yeimba yako yaunofunga inokodzera kuoneka pane ino runyorwa?. Kana zvirizvo, tiudzei kuburikidza neemail email kana nzvimbo yakachengeterwa mhinduro pane ino positi uye tichazvizadza mune irwo runyorwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Raspberry Pi » Raspberry Pi mapurojekiti
José María Díaz weSan Pedro Riera akadaro
Ndine media media ine Raspbery pi uye iyo LibreElec kugovera (diki linux ine Kodi yakavakirwa mukati). Iyo yakasarudzika uye - ine yemahara Android application inonzi Kore, unogona kuzvidzora kubva kunharembozha yako… Haikwanise kudhura.
Pindura kuna José María Díaz kubva kuSan Pedro Riera
Ndiri kuisa pamwechete feeder asi kune imbwa dzangu dzisingakwanise kuwana chero chinhu chinosvika kunze kwekongiri kana simbi nekuti vanochiparadza uye nzira yekuendesa chikafu muchirongwa chaunotumira inonakidza, kunyange zvisiri izvo. Ndiri kushandisa ESP32 iyo inodzora iyo 64kg simba servo iyo inoteerera kune diki diki rasipibheri seiri nani scalability. Zvirinani zviparadzanise api interface kubva kune yakananga mashandiro.
Miam Fekitori, iyo kambani inogadzira chokoreti ne 3D kudhinda uye inoitumira kumba kwako
DJI inopa madrones ayo kuda kuziva 'offline' maitiro